स्वस्तिमालाई ह्याट्रिकको डर ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
स्वस्तिमालाई ह्याट्रिकको डर !
By Digital Khabar Last updated Dec 12, 201940
२ महिनाको अन्तरमा २ सुपर फ्लप फिल्म दिएकी उनी अब यस वर्षको अन्तिममा फिल्म ‘चपली हाइट ३’ लिएर आउँदैछिन् । यो फिल्म चैत २८ गते फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ सँग भिड्दैछ । यो फिल्म उनका लागि समीक्षात्मक र व्यापारिक दुबै रुपमा सफल हुन आवश्यक छ । यदी यसो हुन नसके उनले यस वर्ष फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्नेछिन् ।
भने, आलोचनाको पनि शिकार हुनुपर्नेछ । पहिलो पटक सस्पेन्स-थ्रिलर फिल्ममा काम गरेकी उनी ‘चपली हाइट ३’ मा आफ्नो भूमिका विल्कुलै फरक नभए पनि दर्शकलाई मनपर्नेमा विश्वस्त छिन् । निकेश खड्काको निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रायः नयाँ अनुहारको अभिनय भएका कारण उनी एक्लैको काँधमा फिल्म बोकेर चलाउनु पर्ने चुनौती छ । यो फिल्मले स्वस्तिमालाई एकै वर्ष फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्नबाट बचाउला त ?
आज धान्य पूर्णिमा, उधौली र योमरी पूर्णिमा
भारी हिमपात र हल्का वर्षा हुने
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४५